Posted by ZT at 2:20 PM
I can't makeaproper comment. We are not sure the subsequent problems in our society. We should allow to do it legally or not? Anyway, I feel so sad for pre mature shedding flowers.
ထိန်းသိမ်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံးပဲ ..
ကြားရတာစိတ်မကောင်းစရာကြီးနော် .. ကြောက်ဖို့လည်းကောင်းလိုက်တာ .. အပေါ်ကအကြောင်းအရာက တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာလား ..
တကယ့် အဖြစ်အပျက်ပါ။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော် မြို့နာမည်တွေ ဖျောက်ပြီး ရေးထားတာပါ။ ကြာတော့ ကြာပါပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ် နဲ့ ၁၀ နှစ်ကြား လောက်က ဖြစ်ခဲ့တာပါ။
အားပါးပါး.. တကယ့် အဖြစ်အပျက်တဲ့...
Shwe Bo Thar said...
I dont wanna keep control during lover's time..so, i upgrated it. :P
တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်ဆိုတော့ တော်တော်ငယ်သေးတာပဲ.. လှပတဲ့ အနာဂတ်တွေ ရှိနိုင်ရက်နဲ့ အမှားတစ်ခုကြောင့် လောကကြီးကနေ စောစောစီးစီးထွက်သွားရရှာတယ်။စိတ်မကောင်းစရာပဲနော်။
ဖတ်ရတာ စိတ်မကောင်းစရာပါပဲဗျာ။ ကိုZT သူငယ်ချင်းပြောသွားတဲ့
"အားလုံး ဝိုင်းပြီး အဖြေရှာရမယ့် ကိစ္စ။” ကြီးပါပဲ။
ဂျာမနီနိုင်ငံမှာ ၄ပတ်မကျော်ရင် တရားဝင်ဖျက်ခွင့်ပေးတယ်လိုမှတ်ဖူးတယ်။ အဓိက လူတိုင်းလုပ်နေတဲ့ အလုပ်ကြီးတစ်ခုကို ပွင့်ပွင်လင်းလင်း သင်ကြားမှု မရှိနိုင်တဲ့ အခြေအနေပါပဲ။
Prevention is better than cure. I'm sure that they know these methods. However, the prevention materials are not also easily accessible. (10 yrs ago, I don't know now) Some drug store look at the customer, who buys these things, likeacriminal.
သိပ် ကောင်းတဲ့ Comment တွေပဲ ဗျာ
အကိုကြီးရေ ညီလေးအားပေနေတယ်နော် ဆက်ရေးပါ
Comment ရေးသူအားလုံးလဲ ကျေးဇူးပါဗျာ
ပြောတော့ ပြောချင်တယ် ပြောလည်း မပြောချင်တော့ဘူး...
ဖြစ်သင့်တဲ့ အခြေအနေမှာ လုပ်သင့်တာကို လုပ်လိုက်ရင် ဘယ်သူဘာပြောပြော သိပ်မလိုအပ်ဘူး ထင်တာပဲလေ...
ပညာတတ်တွေ များလာတဲ့အလျှောက် တရားဝင် ဖြစ်ဖို့ ဆိုတဲ့ ဘက်ကိုပဲ အားပေးပါတယ်... လက်သည် တို့ nurse တို့ အပ်လို့ သေတာထက်စာရင် လက်ခံပြီး အကောင်းဆုံး ဆောင်ရွက်ပေးတာ ပိုကောင်းတယ် မဟုတ်ဘူးလား :D
အကယ်လို့ ငါ့ညီမသာ ကလိုဖြစ်ခဲ့ရင်ကော လို့လည်း တွေးကြည့်ပါတယ်။ သူ့ဘဝအတွက် သူရွေးချယ်ရာမှာ မဖြစ်သင့်တဲ့အချိန်ဆို ဖျက်ချချင်မှာပဲ။ ဖြစ်နိုင်တဲ့အချိ်န်ဆို မွေးမှာပဲ။
(ဘာတွေ ပြောမိမှန်းတောင် မသိတော့...)
တကယ်ကြီး? အဲဒိအဒေါ်ကြီးအိမ်မှာအလောင်းတွေ အများကြီး။ ကြောက်စရာပါလားဟရို့။ အကျိုးကြောင့်အကြောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်
ဒီလို ကြေကွဲဖွယ် အဖြစ်တွေ ဘယ်လောက များများ ရှိမလဲ။
သွေးသားဆန္ဒနောက် လိုက်မိသူတွေ အပစ်လား။ အရပ်လက်သည်တွေ အပြစ်လား။
သေချာတာကတော့ တာဝန်ကိုယ်စီ ရှိကြသည်။